IEF ACEEM Andravoahangy – ACEEM
IEF ACEEM Andravoahangy
IEF ACEEM Andravoahangy: Sampana iray ao anatin’ny vondrom-panabeazana. Ramatoa Razafimanantsoa Eliane no Proviseur eto anivon’ny IEF ACEEM.
Ny taona 1995 no niorenan’ny IEF ACEEM. Izy no sekoly voalohany naorin’ny Vondrom-panabeazana ACEEM taorian’ny Cours ACEEM. Tsy nitsaha-nivoatra sy niroborobo araka ny filàn’ny raimanadrenin’ny mpianatra ny IEF ACEEM, ary dia hita ao aminy avokoa ny ambaratongam-pampianarana:
Ny Collège ahitana ny classe de 6ème hatramin’ny 3ème
Ny Lycée misy ny classe de 2nde hatramin’ny Terminale A/C/D
Matoa mitatra toy izany ny IEF ACEEM dia ao aminy ny fahombiazana; indrindra fa eo amin’ny fahafaham-panadinana amin’ny fananany tetik’ady manokana hiatrehana izany.
Toy ireo sampana isanisany ao anatin’ny vondrom-panabeazana aceem dia manana ny teny filamatra ihany koa ny IEF ACEEM: NY FIHAVANANA, NY FITSIPIKA ary NY HO AVY. Ezahina tokoa ny mampihatra ireo mba hiainan’ny mpianatra. Hentitra araka izany ny fitsipika sy fifampifehezana ka tsy tokony hanana ahiahy ireo raiamandreny amin’ny fanabeazana ny zanany eto amin’ny IEF ACEEM Andravoahangy.
Mampiavaka ny IEF ACEEM ny endri-panabeazana tsy mihanina fotsiny ao anatin’ny rindrin’efatra fa mikatsaka ny fampivelarana ny ankizy sy famolavolana ny tanora hiatrika ny fiainana. Raha fintinina izany dia sekolin’ny fiainana ny IEF ACEEM Andravoahangy.
Na ny lafiny Sosialy, na ny lafiny Kolontsaina, na ny lafiny fanatanjahantena dia tsy misy atao ambanin-javatra eto anivon’ny IEF ACEEM. Ohatra amin’izany eo amin’ny hetsika Sosialy, ny hetsika antsoina hoe DARAZAY natao hitarihana ireo mpianatra hahay mizara amin’ny ankizy toa azy sy hahay mitsinjo ny tsy manana. Eo amin’ny hetsika Koltoraly ny antsoina hoe SAHOBY IEF izay fanao isan-taona natao indrindra, ho fisindahana kely amin’ny fianarana ka isan’ny misongadina amin’izany ny fifidianana ny hoe Ndrematoa sy Rasoameva. Tsy ataon’ny IEF ACEEM ambanin-javatra ihany koa ny lafiny fanatanjahantena; misy ny mpanazatra manana ny maha-izy azy sy manana traik’efa.
Izany rehetra izany no hilazana fa Sekoly fianarana ny fiainana ny IEF ACEEM. Mampiavaka ny eto ny fifampifehezana sy ny fitsipika, koa fanamby no ataon’ny IEF ACEEM dia ny haha-olombanona ireo mpianatra ao aminy, koa misokatra ho antsika àry ny IEF ACEEM Andravoahangy, ahitana ireo kilasy rehetra SIXIEME ka hatramin’ny TROISIEME; ary SECONDE ka hatramin’ny TERMINALE.
Laharam-pifandraisana: 22 320 00 na ny 0 34 49 600 71.
Matokia ny ACEEM dia hatoky ny tenanao ianao.